Thursday February 14, 2019 - 21:23:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Taliska ciidamada Midowga Afrika ee duullaanka gardarrada ah ku jooga dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay isbedel weyn oo lagu sameyeay qorshaha ciidamadooda ka dagaallammaya dalka.
Kadib shir muddo afar maalmood ah socday oo Jeneraallada ciidamada AMISOM ay ku yeesheen xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa lagasoo saaray go'aammo dhowr ah oo dhammaantood muujinayay guuldarrada aan kasoo waaqsashada laheyn ee ay kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan Shabaabul Mujaahidiin.
Jeneral Tigabu Yilma Wondimhunegn oo ah taliyaha cusub ee Ciidamada AMISOM ahna taliyaha ciidamada Itoobiya ee xoogga ku jooga Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha cusub ee ay dejiyeen uu dhigayo in mardambe aysan weerar abaabulan oo loo adeegsanayo gaadiidka gaashaaman aysan ku qaadi doonin degmooyinka iyo deegannada ay maamusho Al Shabaab balse ay qaadi doonaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah.
Waxaa uu sheegay in meesha laga saaray Ciidamadii iyo gaadiidkii faraha badnaa ee mar kaliya duulaan ku qaadi jiray Al-Shabaab, taasoo qaraxyo waddooyinka lagula eegto uu khasaare xooggan ka soo gaaro ciidamadooda " waxaan qaadi doonnaa weeraro cayiman oo cadowga aan ku beegsan doonno si aan uwiiqno dhaq dhaqaaqooda" ayuu yiri Jeneral Tigabu.
Shaxdan cusub ee ciidamada AMISOM ku wajahi doonaan Al Shabaab waxaa kamid ah in ciidamada lagasoo qaado furimaha ku dhow magaalooyinka Al Shabaab maamulaan loona diyaari doono qaab ay ku yaraynayaan khasaaraha kasoo gaaraya weerarada xoog kugalka Al Shabaab ka imaanaya iyo qaraxyada lagu beegsanayo gaadiidka gaashaaman.
"Qorshaha cusub waxaa ka mid ah in Albaabada la isugu dhufto Saldhigyo badan oo ku yaala gobolada qaar marka ay dalka isaga baxaan illaa 1,000 askari oo ka socda Ciidanka Burundi oo dhamaadka bishan ka baxaya Gobolka Shabeellaha Dhexe" ayuu hadalkiisa sii raaciyay taliyaha AMISOM.
Dagaalka Ku dhufo oo ka dhaqaaq dan ma uyahay AMISOM?
Khubarrada melleteriga ayaa rumeysan in dhawaqa kasoo yeeray taliska ciidamada Jinsiyadaha kala duwan leh ee duullaanka ku joogo Soomaaliya uu banaanka soo dhigayo jabka dhanka melleteriga ah ee dhabarka loo saariyay.
Awoodda Nidaamiga ah ee ku duushay dalka shisheeye ma awooddo qaadista hanaanka dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaq sababtoo ah cidda ay dagaalka nuucaas ah lagelayaan waa awood dhaq dhaqaaq khafiif ah leh oo karta in ay weerarada kusoo socda ogaato waxaana awooddaas khafiifka ah ufuran in ay qaaddo ka hor tag ama aag bedelasho.
Dadka Odorosa arrimaha dagaalka Soomaaliya waxay farta ku godayaan in Al Shabaab ay ka gudubtay marxaladdii lawiiqi lahaa sababtoo ah waxay ku dhax xididaysatay shacabka Soomaaliyeed, khibrad iyo calool adeyg heer sare ah ayayna ka dhaxashay dagaalka sii daba dheeraaday ee AMISOM dalka ka waddo wax ka badan 12 sanadood xiriir ah.
Awoodda nidaamiga ah ee leh gaadiidka gaashaaman iyo ciidamada guutooyinka ah uma fududa in ay weerar kedis ah ku qaaddo meelaha ay maamulaan xoogaga Al Shabaab ee guurguura, waxaana aad u adag in alshabaab lagu dayo isla qorshihii ay iyadu cadawgeeda uga adkaatay oo ah dagaalka Xarbul Cisaabaadka loo yaqaan.
Maxaa dhabarka ka Jabiyay duullaanka AMISOM ee Soomaaliya?.
Al Shabaab ayaa sanaddii 2011 ku dhawaaqday isbedel melleteri oo dhanka dagaalka ah wixii xilligaas ka dambeeyay ayay qaadday weeraro ay ku naafaynayso isku socodka ciidamada AMISOM ee gobollada dalka waxayna xarakadu ku guuleysatay in ay dagaalka ku dheerayso shisheeyaha illaa markii dambe ay isaga baxeen magaalooyin iyo dhul istiraatiiji ah oo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka.
Sanaddii 2015 ayay Al Shabaab billaawday wax ugub ku ahaa dagaalka Soomaaliya waxayna cagta marisay oo ay soo afjartay saldhigyo waaweyn oo ciidamada Burundi,Uganda,Kenya iyo itoobiya ay ku lahaayeen gobollada Shabeellaha hoose,Bakool, Gedo,Hiiraan iyo Jubbada Hoose.
Al Shabaab waxaa hoggaanka u haya hoggaamiyaal ay ku fogaatay cadaawadda ay u qabaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa la shaqeeya, hoggaamiyaashan waxay leeyihiin caqiiqddo adag oo ah waxa ku riixaya in wax walba oo dhib ah udhabar adeygaan sidoo kale waa wadaaddo ay ukulantay cilmiga diiniga ah iyo midka maadiga ah.
Al Shabaab waxay soo saartay askar iyo saraakiil loo carbiyay dagaalka adag ee jabhadeyska loo yaqaan shakina kuma jiro in ay xarakado sugeysay in maalin uu AMISOM wax ka bedeli doonto dagaalkeeda si iyana ay dhan kale ugu rogaan dagaalka.